मनोवैज्ञानिक को सल्लाह - एक मायालु एक को धोखा कसरी बचाउन को लागी
एक पतिको अपमानिताको अप्रत्याशित खबरले धोखाधडी महिलालाई अवसादमा लैजान सक्छ वा अनावश्यक कार्यहरूलाई धक्का दिन सक्छ। एक मायालु व्यक्तिको धोखा कसरी बचाउन - एक मनोवैज्ञानिक सल्लाह को सल्लाह। तथापि, यो मनमा हुनु पर्छ कि "तीव्र" र पुरानो परिवर्तनका कार्यहरू भिन्न छन्।
आफ्नो पतिको धोखा कसरी बचाउनुहुन्छ - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
अप्रत्याशित खबरको अपमानजनक समाचार "जस्तै टाउकोमा हिउँ," मनोवैज्ञानिकहरूले "तीव्र" भनेर व्याख्या गरेका छन्। "तीव्र" परिवर्तनको बारेमा जानकारीले व्यक्तिलाई ओभरलोड अवस्थामा जान्छ: उनको दिमाग तुरन्त विभिन्न विचारहरू र भावनाहरूसँग डराउँछ। एक तेज मनोवैज्ञानिक पीडाले तंत्रिका तंत्रलाई गम्भीर क्षति ल्याउन सक्छ, त्यसैले सबैलाई "पुनःबुट" गर्न आवश्यक छ। बेवकूफबाट बाहिर जानुहोस्, नकारात्मक फ्याँक्नुहोस् र तनाव मद्दत गर्नेछ:
मोटर गतिविधि - दौड, कूद;
कुशन वा भाँडा मारेर;
मनोवैज्ञानिकहरूले आफैलाई रोक्न र दुखाइ राख्न आफैलाई यो सल्लाह दिँदैन - यो गम्भीर रोगहरू, न केवल तंत्रिका प्रणाली मात्र होइन तर व्यतीत हो।
धोखाधडी महिलाको अर्को चरण गठन गरेको छ खालीपन को लागी आफैलाई रोजगारीको खोजी गर्न हो। यदि तपाइँ अब खाना, धुलाई र इस्त्री गर्न समर्पित गर्न सबै शाम र सप्ताहांतको आवश्यकता छैन भने, तपाइँ एक विदेशी भाषाको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, जिममा जान सुरु र प्रायः प्रकृतिमा जान्छ।
के बावजूद कस्तो निर्णय गरिनेछ - गडार वा भाग लिनु, एक महिलाले आफूलाई काम गर्न आवश्यक छ। र विकास बिन्दुहरू पत्ता लगाउन यो "खराब र दुखी", मुख्य लक्ष्य महसुस गर्न आत्म-बहिष्कार हुनुपर्दैन, तलाकको घटनामा पनि तपाईंको जीवनलाई मनपर्छ।
आफ्नो पतिको निरन्तर अपमानिता कसरी जीवित रहने - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
नियमित - पुरानो - पतिको धोखाले पनि महिलाको मानसिकतालाई गम्भीर चोट पुर्याउँछ। यो व्यापक रूपमा मानिन्छ कि यदि एक पतिले "बायाँ" साहसिक भोग्नु हुन्छ, त्यसपछि यो उपयुक्त हुन्छ। तथापि, प्रायः यस्तो परिवार बच्चाहरु र वित्त द्वारा एक साथ रहन्छ। परिस्थिति अत्यन्तै गाह्रो छ जब पत्नीले ईश्वरीय पतिलाई ईमानदारीपूर्वक प्रेम गर्छ।
एक महिला, यदि उसले एक हिड्ने पतिसँग बाँच्ने निर्णय गर्छ भने, मानिसमा भावनात्मक र भौतिक निर्भरता कम गर्नु पर्छ। अधिक स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर महिला महिला हुनेछ, त्यो कम अनुभव हुनेछ। यसको अतिरिक्त, सम्भव छ कि "नविकरण" पतिले फेरि आफ्नो पतिको ध्यान आकर्षित गर्नेछ। र यदि यो भएन भने अर्को पुरुष एक महिलाको बाटोमा देखा पर्न सक्छ, जसले उसको प्रशंसा गर्नेछ।
पतिलाई कसरी अपमान गर्न सिकाउन सिकाउनुहुन्छ?
किन स्त्रीहरूले आफ्ना कानका साथ प्रेम गर्छन्, र तिनीहरूका आँखाले पुरुषहरू?
कसरी पत्राचार गरेर मान्छे मन पर्छ?
पुरुषहरू किन मोजाहरू मन पराउँछन्?
विवाहित प्रेमी - मनोविज्ञान
पतिलाई कसरी व्यापार यात्राबाट भेट्न सकिन्छ?
विवाहमा नामहरूको संगतता
कसरी मायालु एक रोमांटिक साँझ व्यवस्थित गर्ने?
मस्जिद - नुस्खा
पेट गुफाको पङ्क्ति
मक्खन र मार्जारिन बिना कुकीज
बच्चाले तापमान गुमाउँदैन
40 हप्ता इशारा - दोस्रो जन्म
शेख जाइद मस्जिद
खरगोशको साथ खाए
तेलको लागि चाकू
एक कोठा कोठाको लागि विचार
Nyvyanik - बीउ बाट बढ्दै
जिमी चू फ्लैश
कैसे प्लास्टरबोर्ड देखि छत पतली छ?
गलियारे मा फर्नीचर - ग्रिड मा फर्नीचर को व्यवस्था कसरि गर्ने र इंटीरियर तोडने छैन?
महिला समर श्वेत 2015
सिंक संग धुलाई मिसिनको लागि मंत्रिमंडल
मनपर्ने स्कर्टको साथ ड्रेस गर्नुहोस्
क्याल्विन क्लेन ब्यूटी
पर्खाल पलीचरर्थ वार्निश